1-dii Julay 1960: Maalin Soomaalilaan Is-khasaarisay Khasaarihii ka Dhashay Midowgii Somaliland iyo Soomaaliya | Maalmahanews
1-dii Julay 1960: Maalin Soomaalilaan Is-khasaarisay Khasaarihii ka Dhashay Midowgii Somaliland iyo Soomaaliya
July 3, 2017 - Written by Maxamed Sulayman
1-dii Julay 1960: Maalin Soomaalilaan Is-khasaarisay
Shacabka reer somaliland waxa ay rajaynayeen inay barwaaqo ceegaagta cagaha la galayaan marka la is-raaco ee ummadda shantii Soomaaliyeed midowdo. Balse waxa ay riyadaasi isu-rogtay riyo maalimeed aanay waxba ka jirin. Dhibaatooyinkii is-raaca ka dhashay way badan yihiin, laakiin waxaynu dul-istaagi doonaa kuwa ugu waaweyn:
Markii la dhisay dawladdii ugu horaysay ee reer Somaliland ee laga siiyey afar wasiir, taliyaha ciidanka asluubta ee aan wax kale loogu darin, ayey bilaabeen saluug iyo niyad jab. Halka soomaaliya ay qaateen Madaxweynihii, Raysal-wasaarihii iyo intii ugu badnayd wasiiraddii iyo madaxdii hayadaha madaxa bannana.
Sannadkii 1963-kii ayuu Wasiirka Arrimaaha Gudaha ee wakhtigaasi C/risaaq X. Xuseen (AUN) ayaa booqosho ku yimid Somaliland, isagoo loo soo diray inuu soo dejiyo cadhadii ka dhalatay codayntii distoorka, ka dib dadkii ayaa ku mudaharaaday oo cabasho kala hortagay. Isu-soo-bax weyn ayaa lagu qabtay Beerta xoriyadda, ka dib C/risaaq ayaa soo galay si dadka ugu khudbadeeyo. Dadkii ayaa dhabarka u jeediyey. Halkii wasiirku uga garaabi lahaa ayuu ku yidhi” reer Hargaysow sii jeedka ayaad ku qurux badan tihiin”. Manay suurtogalin khudbadii uu damacsanaa
Cali Jaamac Qalinle…..Taariikhda Ummadda Soomaaliyeed (2009).